Izinqubo Zokusebenzisa Amakhamera Womzimba Ogcwele | Izixazululo ze-OMG
Umhlinzeki Wamakhamera Ophezulu Wold Camera
Izinqubo Zokusebenzisa Amakhamera Womzimba Worn
Ikhamera egqoke umzimba ivele yafakwa ohlwini lwabamele ukusebenza komthetho uhlu lwamadivayisi awusizo kakhulu, ngemuva kokuhlola amakhamera nokuwasebenzisa ekuzivocavoca nasekuvivinyweni kokuvivinya, kuye kwaba nalesi sivumelwano ngalokhu; kubaluleke kakhulu ekugcineni izinhlobo ezithile zamacala ezivela kubaphathi bomthetho kanye nezakhamizi. Akuzona izindaba ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba athole ukunakwa okuningi ngakuyo ikakhulukazi ezinhlanganweni ezisebenzisa umthetho. Ochwepheshe kwinhlangano esebenza ngokuqinisa umthetho banikeze ukucabangisisa ngezinto ezinamandla ukwamukelwa okulethwa yileli ikakhulukazi ikhono lokuqapha isenzo sabo. Uhlelo lwekhamera egqoke umzimba lubukwe njengendlela yokwandisa ukuziphendulela, ukwenza izinto obala kanye nobudlelwano phakathi kwamaphoyisa nomphakathi (ubudlelwano obungebuhle njengoba abantu bomphakathi bengawathandi amaphoyisa).
Njengoba kushiwo ngaphambili, ubuchwepheshe obunikeza ukubonwa kwevidiyo abuzange buqale ukubakhona kwi-21st ikhulu leminyaka. Kuma-90 okuqala, bekusetshenziswa okujwayelekile kwamakhamera edeshibhodi ayesetshenziselwa ukuqopha ukungaboni ngaso linye noma noma yini eyenzeka phakathi kwezikhulu nezakhamizi ngenkathi zisalunguza. Yize bekukhona ukwenqatshwa kokuqala kwalo mbono, izikhulu zaziphikisana nazo iningi labo lalingafuni ukuthi “mfowethu omkhulu” njengoba babevame ukuthumela ikhamera ngaleso sikhathi. Kepha njengoba isikhathi sihamba, kwaba nokwanda kwamacala lapho izakhamizi zimangalela izikhulu ngezinto eziningi, lokhu kufaka phakathi ukusetshenziswa kwamandla okungafuneki ukuphatha amacala. Kungekudala abaphathi baqala ukwamukela amakhamera wedeshibhodi futhi ngokushesha kwaba nokwamukelwa okubanzi. Ngaleso sikhathi, ithelevishini eyayivalekile (i-CCTV) yayichuma futhi isiza kakhulu ekuxazululeni amacala kalula nangobufakazi obuningi. Futhi, ukusungulwa kwe-smartphone bekuvele kunikeza wonke umuntu ikhamera, noma ngubani angathatha izithombe noma nini futhi zomunye umuntu noma yini. Ngaphambi kokuthi abantu abade abane-Smartphones basebenzise ukuqopha amapholisa ngesikhathi besemsebenzini, lokhu bekukwenza kube nesidingo nokuthi abaphathi babe nobuchwepheshe babo bokubhekwa. Ocwaningweni lwakamuva olwenziwe e-US, kwatholakala ukuthi iningi lezakhamizi ligunyaza ukusetshenziswa kwekhamera egqokwa ngumzimba. Idivaysi esele bayemukele futhi bayivuma ihloselwe ukuvunyelwa.
Ukutholakala okwandayo nokwamukelwa ezinhlelweni zalobu buchwepheshe kuveza izingqinamba ezithile ezinzima, okunye kwalolu daba kufaka phakathi; lapho ukuqoshwa kungathathwa, amazinga okufanele ahlangatshezwe ukuze idatha igcinwe bese ukusetshenziswa kwayo, ukudalulwa kanye nokuvumelaniswa kwayo kwesikhathi esizayo nge-geotagging (GPS) kanye nobuchwepheshe bokubona kobuso. Kodwa-ke, omunye umphakathi uthi izindleko zokusebenzisa lolu hlelo ziveza ngempela izinzuzo zalo yingakho zithathe isinqumo sokusebenzisa noma ukuzisebenzisa. Kulokhu kubhala sinethemba lokuhlinzeka ngemikhombandlela kunoma yini umphakathi ekhetha ukuhambisana nayo nobuchwepheshe, ngalokhu esibekiwe sikugwema ukuxoxa ngokuthi lolu hlelo kufanele lwamkelwe noma cha. Sijwayele ukubheka izinqubomgomo ezidingekayo ekusebenzeni kahle komphakathi futhi zivikele namalungelo omphakathi. Ezinye izindaba okufanele zibhekwe ngumnyango yilezi:
Imiphumela yokubandlululwa, zombili uma uxhumana nezakhamuzi nezinhlangano eziqinisa umthetho
Izinkinga zangasese zombili zamaphoyisa namalungu omphakathi
Umthelela ekuziphatheni komphakathi nasemphakathini futhi
Yenza ithuba lokuqeqeshwa ngamaphoyisa
"Ividiyo ethathe uhlangothi" ngomnyango wezezimali kanye nomnyango wamaphoyisa
Dinga indlela yokuhlela, lokhu kufaka phakathi izinsizakusebenza zabasebenzi nezindleko zezezimali zokusebenzisa uhlelo.
Kodwa-ke, amakhamera agqokwa ngumzimba akuyona i-panacea. Ukuzisebenzisa ngaphandle kwezinqubomgomo ezinhle ezanele zokuzisekela kungaholela ekulimaleni okukhulu ezinhlanganweni eziqinisa umthetho futhi zihlose ukuzisebenzela. Phakathi kwalokhu kukhathazeka umthelela ongabakhona ezinhlobonhlobo ezibanzi zamanani asemthethosisekelo namalungelo. Ngokuhambisana nalokhu, izinhlaka kufanele zibhekisise izinzuzo nobubi obulethwa yikhamera yomzimba lapho kuthathwa isinqumo sokuthi zingasungulwa kanjani futhi kanjani ukuze zivumelane nomphakathi okhulayo futhi oguqukayo. Sizama ukubheka ezinye izingqinamba ezithile ezingabhekana nabamele abomthetho kanye nemiphakathi lapho izama ukusebenzisa ikhamera egqoke umzimba. Ikomidi lephrojekthi yomthethosisekelo ngezinguquko zamaphoyisa linikeza izincomo ezithile kodwa likholwa ukuthi zingasetshenziswa ukuxazulula noma mhlawumbe zinciphise lezi zingqinamba. Lezi zincomo zifingqiwe ngezansi njengokulandelayo:
Amakhamera agqokwa ngomzimba kufanele asetshenziswe kuphela ukuqhubekisela phambili injongo echazwe ngokucacile futhi echaziwe, akumele isetshenziselwe ukusetshenziselwa kwasekhaya noma okungeyena owezingcweti ngezinkinga ezihlobene nomsebenzi ezingewona umsebenzi
Abenzi bezinqubomgomo kumele babe nenkulumo yokuhlala phansi nabasebenzi abasebenza ngomthetho njengoba amakhamera agqokwa ngomzimba edluliselwa ukusetshenziswa endaweni ephansi kwegunya labo.
Abenzi bezinqubomgomo kumele bahlanganyele nemiphakathi futhi babe nesivumelwano nabo maqondana nemithetho abavumelana ngayo nokuthi izolawula kanjani ukusetshenziswa kwekhamera egqokwa ngumzimba yale nhlangano.
Umgomo oshiwo ngokucacile kufanele ube nesigaba esifaka uhlobo lomcimbi ongarekhoda noma ongasho nje ukuthi yonke imisebenzi ehlobene nomsebenzi iyaqoshwa.
Iziphathimandla kufanele zikwazi ukuphuma zihlanzekile futhi zitshele izakhamizi ukuthi ziyaqoshwa, banelungelo lokuthi bazi ukuthi izenzo zabo ziyaqoshwa noma nini
Uma isakhamuzi sicele ukuqoshwa kufanele kumiswe, kulindeleke ukuthi iphoyisa liyeke ukuqopha ngokushesha.
Izinqubomgomo kufanele zisho ngokusobala ukuthi yini isiphathimandla esiphoqelekile ukuba siyenze maqondana nokurekhoda, nesijeziso esingatholwa ngokunqamuka nokwephula izinqubomgomo.
Ukulondolozwa kwedatha nokusetshenziswa kwedatha
Noma iyiphi ividiyo eye yabuyekezwa futhi yaqinisekiswa ukuthi inobufakazi kufanele igcinwe iphephile futhi ifakwe ekugcineni. Amavidiyo angafakazeki angasuswa ngemuva kwesikhathi esithile.
Iqoqo lokugcina lobufakazi kumele ligadwe kakhulu futhi livikelwe kahle futhi libhalwe phansi.
Ukufinyelela kwamagosa amavidiyo kufanele kube kunqunyelwe kakhulu futhi lapho enikezwa ukufinyelela kulawa mavidiyo, imisebenzi yawo yamalogi kufanele ilandelwe futhi ukuqoshwa nakho kufanele kwenziwe.
Ngemuva kokubhala umbiko wokuqala, abaphathi kufanele bavunyelwe ukuthi babuyekeze ukuqopha kwabo ngoba kungabasiza ukuba bakhumbule izinto abazengeza.
Izindinganiso ezifanele zokuphepha kwedatha nezingcweti ze-cybersecurity kufanele ziqashelwe ukugcina le datha ingatholakali ngendlela engafanele ngezindlela ezikude nasekuvinjelweni ngokungemthetho okuyikho.
Uhlelo lokucwaninga olusebenzayo kufanele lube khona ekufinyeleleni okungafanele noma ekuphazamiseni amafayela wedatha.
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokuthi ithegi kufanele kuncishiswe kakhulu futhi uma kufanele kwenziwe, ukugunyazwa kokwahlulela kufanele kunikezwe
Noma yinini lapho ukwabiwa kuhulumeni okukhona kuhulumeni kufanele kwenziwe, kufanele kudinge ukuthi inkampani etholwayo iqashe izinqubomgomo eziqondisa ibhizinisi elenzanayo ukuze kugwenywe izingxabano.
Ukufinyelela idatha yomphakathi
Noma nini lapho umuntu othile ethwebula ividiyo ethile, kufanele bavunyelwe ukuthi babuyekeze leyo vidiyo ngoba ivela kuyo banelungelo eligcwele lokuyibona futhi babuyekeze futhi
Ukukhishwa kwevidiyo njengesicelo serekhodi lomphakathi kufanele kuvunyelwe ngokuvunyelwa kabusha okwanele.
Ngenkathi kudedelwa ividiyo ehambisana nenqubo yenkantolo kubaluleke kakhulu ukuthi ilandela yonke imithetho yobufakazi.
Ukuqeqeshwa okufanele kumele kunikezwe zonke izikhulu ezonikezwa ikhamera yomzimba, kufanele zikwazi ukusebenzisa kahle ucingo.
Iziphathimandla ezisebenzisa ikhamera yomzimba kufanele zifundiswe ukuthi zingakhipha kanjani idatha yazo uma kubandakanya ukwenza kanjalo ngenkathi kufakwa umbiko wokuqala.
Isikhulu kufanele senziwe kahle futhi sifundiswe mayelana nezinqubomgomo zobumfihlo nokuthi singakugwema kanjani ukwephula ukugwema ubunzima.
Ukutholakala kwezinqubomgomo nezinguquko
Yonke inqubomgomo ehlobene namakhamera agqokwa ngomzimba kufanele kube yimithetho ebhaliwe futhi iningi latholakala emphakathini, ikhamera yomzimba ifinyelela kubaphathi nakwezakhamuzi ezisebenzayo. Izakhamizi zinelungelo lokwazi izinqubomgomo eziqondisa amadivaysi abawamukelayo zingasetshenziswa ukwenza umphakathi ube ngcono futhi usize namaphoyisa emisebenzini yawo.
Umnyango kufanele ube usukulungele nganoma yisiphi isikhathi ukubukeza izinqubomgomo futhi uguqule izinto ngezikhathi ezithile nokufakwa komphakathi nesaziso sawo kukho konke ushintsho lapho kwenziwa.
Izinqubomgomo ezifanele ngokuhlangana noxhaso lwezezimali
I-federal federal kufanele ihambisane nokwamukelwa kwezinqubomgomo ezithile nezisebenzayo ezizoqinisekisa ukusetshenziswa okuphephile futhi zivikele nezinkinga zokwephula ubumfihlo.
Sengiphetha, awukho umthetho osobala othi ikhamera egqoke umzimba kumele yamukelwe noma ingavunyelwa, wonke amandla angazikhethela uma eyifuna futhi nakanjani azi ukuthi kungani eyifuna. Kukholakala nokho ukuthi izindawo ezamukele ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba ngokulandela imihlahlandlela engenhla zizoqinisekisa kangcono ukuthi uhlelo luphakamisa amalungelo nesisekelo sisekelo, okubaluleke kakhulu kuwo wonke umphakathi
Izinqubo Zokusebenzisa Amakhamera Womzimba Worn igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3763 Ukubuka kwe-4 Namuhla
↳ I-BWC095-WF - Ikhamera ye-WIFI ye-GPS Live yokusakaza Umzimba (Ibhethri Elisuswayo)
↳ I-BWC097-WF4G - I-OMG Android Wifi 3G / 4G i-Bluetooth Walkie Talkie enekhamera ye-Two Way Radio
↳ BWA004-LB - Umzimba we-OMG Cam Lanyard Bag / Pouch
↳ I-BWA015 - Umzimba Wamaphoyisa we-OMG Worn Camera Beer Belt Strap
↳ Umsunguli weCamera weSpecial Worn Camera Distributor